WORLD OF TDS | general, it,photography,knowledge and funny
WORLD OF TDS
general, it,photography,knowledge and funny
ပိုမို စိတ်ချရတဲ့ Gmail Account ဖြစ်အောင်..
အခုတလော Website တွေအပြင် Gmail , facebook account တွေပါ hacking လုပ်ခံရတာတွေ များလာတာ တွေ့နေရပါတယ်.. မကြာသေးခင်က နာမည်ကြီး ဂျာနယ်တစ်စောင်ရဲ့ facebook account အဟက် ခံလိုက်ရပါတယ်.. Gmail Continue reading →
ကျွန်မ ချစ်သူ အာဆေ……….
အချစ်သည်ထူးဆန်းသော ခံစားမှုမျိုးဖြစ်သည်..။ ကျွန်မ ၏ အချစ်သည် သူငယ်ချင်းရဲ့ ပြောပြချက် စကားများ အရ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်..။ (သူငယ်ချင်း က အောင်သွယ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်..။) သူကို ကိုယ်သေချာ မမြင်ရသေးပဲနဲ သူ့ရဲ့ အသံကိုတောင် မကြားဖူးသေးပဲနဲ သူ့ကို တန်းတန်းစွဲ ချစ်မိနေမိပြီ ဆိုရင် Continue reading →
၂သိန်းတန် ဖုန်းတွေ ပေါ်လာတော့ လူတွေ အလျှိုလျှို ဖုန်းကိုင်လိုက်ကြတာ ကျွန်မလည်း လူထဲ က လူတစ်ယောက်ပေပဲ မို့ ဖုန်းကိုင်ချင်တဲ့ရော ဂါ က တက်လာပါတယ်..။ ရောဂါက တက်လာတော့ တက်လာတဲ့ ရောဂါကို ကုသဖို့ နည်းက တော့ ဖုန်းဝယ်လိုက်ခြင်းပါပဲ..။ ရုံးနဲ Continue reading →
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၊ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (Global Warming, Climate Change & Environmental Management)
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု (Global Warming) ပြဿနာကို ယနေ့လူသားတိုင်း ကြုံတွေ့နေကြရပြီဖြစ်သည်။ အိုဇုန်းလွှာ ပေါက်ခြင်း၊ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ (Green House Gas) ထုတ်လွှတ်မှုမြင့်မားလာခြင်း၊ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်သုံးစွဲခြင်း၊ လောင်စာဆီသုံးစက်မှုယာဉ်များ များစွာအသုံးပြုခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာခြင်း၊ သစ်တောများအလွန်အကျွံခုတ်ထွင်ခြင်း၊ Continue reading →
Viber နဲ့VOIP Phone ကို Free ပြောကြမယ်။
Internet WiFi ရှိတဲ့ဘယ်နေရာ ကမဆို၊ ဒါမှမဟုတ် Phone ထဲက 3G နဲ့ ပဲ ပြောပြော၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကြိုက်တဲ့နေရာခေါ် ပိုက်ဆံ လုံးဝမကုန်ဘူးနော်။ 3G နဲ့ Continue reading →
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ ကိုသုံးနေရင် Hangs တာမျိုး Crashes ဖြစ်တာမျိုး ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မိမိတို့စက်မှာ မလိုအပ်တဲ့ process တွေ အလုပ်လုပ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီလို မဖြစ်ရအောင် ဖြေရှင်းနည်း (၁ဝ) ချက်ရှိတယ်။ Continue reading →
လူတွေနေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို လူတွေက ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားနေကြတာလား………..? တိုက်ရိုက်တစ်မျိုး သွယ်ဝိုက်လို့ တစ်ဖုံ ဒုက္ခမျိုးစုံခဲ့ရပြီ ! ။ လူသားတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုက်စား စာရိတ္တတွေပျက်ပြားလို့ ဖြစ်ပွားလာတာစစ်ပွဲတွေ!!……. မရပ်မနားပဲ ခရီးနှင်နေတဲ့ သိပ္ပံပညာတီထွင်မှုတွေ Continue reading →